Kolontsaina tsara indrindra PP Spunbond Nonwoven mpanamboatra sy orinasa | Henghua
Ny hazo fijaliana - tenona tsy tenona no karazam-bary malaza indrindra ankoatry ny voam-teboka. Ity karazam-bary ity dia tsara tarehy sy lamaody kokoa noho ny voamaina. Mety kokoa amin'ny lamba aseho eo ivelan'ny vokatra. Toy ny lamba ampiasaina hamonosana voninkazo, toy ny boaty tsy misy tenona, izay fahita any Chine.
1 lanja maivana: ny resina polypropylene dia ampiasaina ho akora fototra hamokarana, miaraka amin'ny gravité 0,9 monja, izay telo ampahadimin'ny landihazo fotsiny. Izy io dia marefo ary manana fahatsapana tsara amin'ny tanana.
2. Tsy misy poizina ary tsy mahasosotra: Ny vokatra dia novokarina niaraka tamin'ny akora matanjaka amin'ny sakafo FDA, tsy misy akora simika hafa, manana fahombiazana azo antoka, tsy misy poizina, tsy misy fofona ary tsy mahasosotra ny hoditra.
3. Mpikambana miady amin'ny bakteria sy anti-simika: Polypropylene dia volo simika simika, tsy lanin'ny samoina, ary afaka mitoka-monina ny harafesin'ny bakteria sy bibikely ao anaty ranoka; ny bakteria, ny harafesin'ny alkaly ary ny tanjaky ny vokatra vita dia tsy ho voan'ny erosion.
4. Ny fibre vita amin'ny lamba dia manana firafitra misy poria, noho izany dia manana hafanam-po tsara kokoa izy, ary somary maina ny velaran'ny lamba.
F1: FACTORY ve ianao?
Izahay dia orinasa iray, manana traikefa 15 taona amin'ny sehatry ny lamba tsy tenona.
F2: Inona ny vokatrao lehibe?
PP Spunbonded lamba tsy tenona.
F3: Ahoana no hahazoako ny vidin'ny fifaninanana?
Manomeza anay antsipiriany araka izay azo atao, ao anatin'izany ny Gram, ny sakany, ny loko, ny halavan'ny horonana / ny habetsaky ny volany, ny fampiasana ary raha toa ka misy fepetra takiana manokana amin'ny endri-javatra ohatra ny fanoherana UV, tantera-drano sns Mampanantena izahay fa hanome anao ny vidin'ny orinasa misy kalitao avo lenta. .
F4: Fotoana fandefasana santionany sy baiko?
Fotoana famandrihana ohatra 2-3 andro.
Baiko ankapobeny: 7-15 andro aorian'ny fandoavana.
F5: Ahoana no hahazoako santionany hijerena ny kalitao?
Afaka mandamina santionany aminao izahay hanamarinana ny kalitaon'ny vokatray. Maimaimpoana ny santionany, saingy mila mandoa ny sarany mazava ianao.
F6: Inona no fandoavam-bola azonao ekena?
Raha ny mahazatra dia afaka miasa amin'ny fe-potoana T / T na L / C isika.
F7: Inona no mahatonga ny lamba Henghua ho tsara kokoa?
a. Factory direct: Atolory ny vidiny mahasoa indrindra amin'ny orinasanao.
b. Fanaraha-maso kalitao: Fanaraha-maso ara-nofo rehefa tonga, amin'ny fifehezana andalana amin'ny dingana tsirairay, fanaraha-maso ankapobeny ary fanamboarana alohan'ny famonosana, ekena ny fanaraha-maso avy amin'ny antoko fahatelo. Fanaraha-maso ny kalitao henjana ho fenitra iraisam-pirenena.
Teo aloha: Toetra anti-bakteria PP Spunbond Nonwoven
Manaraka: DOT / Drafitra diamondra PP Spunbond Nonwoven
Vidin'ny lamba lamba, Lamba tsy misy tenona polypropylene Spunbond, Lamba tsy vita tenona Polypropylene, Lamba tsy tenona, Fitaovana tsy tenona, Pp lamba tsy tenona,